हाम्रो शरीरमा लसुनले गर्ने फाइदा बारे जानकारी
सुन बेचेर भएपनि लसुन खान नभुल्नुस्
तपाईंले आज खानामा लसुन खानु भयो - तरकारीमा मसलाको रुपमा त अवश्य यसको प्रयोग गर्नुभयो होला हैन - स्वादका लागि मात्र प्रयोग गरिदैं आएको लसुन धेरै रोगहरुको औषधि पनि हो भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर सानो देखिने लसुनले ब्लडप्रेसर, मुटुको रोग, क्यान्सर, मधुमेह, एड्सजस्ता गम्भीर रोगहरुमा समेत औषधिको काम गर्ने तथ्य वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
लसुनलाई प्रमुख प्राकृतिक एन्टिबायोटिक मानिन्छ । यसले क्षयरोग, फुड प्वाइजनिङ, पिसाब इन्फेक्सन गराउने ब्यारेक्टेरिया लगायत अन्य ब्याक्टेरिया नष्ट गर्छ । त्यसैले प्रथम विश्व युद्ध ताका सै निकहरुलाई लसुन खुवाई उपचार गरिन्थ्यो ।
लसुन पेट र आन्द्राको लागि अति नै लाभदायक मानिन्छ । दैनिक कम्तीमा दुइ केस्रा लसुन खाएमा पेट र आन्द्रामा हुने अल्सरबाट बच्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । साथै यसले पेट तथा आन्द्रामा पर्ने परजीवीहरुलाई समेत नष्ट गर्छ ।
अचेल ब्लडप्रेसर, कोलेस्ट्रोल अनि मधुमेहजस्ता समस्याहरु घर घरमै देखिन थालेको छ । लसुनले यसमा पनि रामवाणकै काम गर्छ । यसले रगतमा चिनीको मात्र घटाउँछ । मधुमेहको औषधि लिईरहेकै बेला पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
दैनिक रुपमा लसुन खानाले रक्तनलीहरुमा रगत जम्ने समस्या हट्छ । यसले गर्दा उच्च रक्तचाप घट्ने र हृदयघातको सम्भावना पनि निकै कम हुने गर्दछ । यसले बाथका रोगीहरुमा हुने दुखाईहरु पनि कम गरेको पाइयो । वैज्ञानिकहरुले विभिन्न प्रयो पश्चात यसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि घटाउने कुरा प्रमाणित गरेका छन् ।
क्यान्सर लाग्ने बित्तिकै हामी तर्सिन्छौं तर लसुनले क्यान्सरबाट पनि जोगाउँछ । यसले विशेषतः पेट, आन्द्राको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ । लसुनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउने हुँदा दैनिक लसुन खानेहरुलाई सितिमिति कुनै रोग छुनै सक्दैन । वैज्ञानिकहरुले एड ्सका बिरामीहरुमा समेत लसुनको परीक्षण गरेका थिए ।
३ महिनासम्म दैनिक लसुन खाएका एड्सका बिरामीहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको पाइयो । जसले गर्दा प्रायः एड्सको बिरामीमा देखिने स्वास्थ्य समस्या रुघाखोकी, झाडापखाला आदि मा धेरै सुधार आएको पाइयो ।
लसुनको गुणगान सुनेर अझै थाक्नु भएको छैन भने लौ सुन्नुस् । यसले वायु विकारमा पनि त्यत्तिकै लाभ गर्छ । साथै बच्चाहरुलाई दुध पिलाउनुअघि आमाले लसुन खाएमा बच्चाको भोक बढ्ने र बढी दुध चुस्नसक्ने तथ्य फिलाडेल्पियाका वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
यो भन्दा अचम्मको कुरा के पाइयो भने यसले मान्छेको मुडमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्दोरहेछ । जर्मन वैज्ञानिकहरुको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ कि नियमित लसुन सेवन गर्दा मानसिक थकान कम हुने, रिस, झिंझो मान्ने, डरत्रास कम हुनुको साथै मन विचलित हुने वा आत्तिने कम गराउँछ । छालामा हुने सामान्य एलर्जीमा समेत लसुन लगाउँदा फाइदा हुन्छ ।
कुष्ठरोगमा समेत लसुन प्रयोग गरिने र खाने गरेको पाइन्छ । लसुनको सेवनले शरीरमा जमेका धातुका कणहरु समेत निष्काशित हुन्छन् । तर्सथ दैनिक ६ केस्रा लसुन खाएर स्वस्थ बन्नेतिर लाग्नैपर्ने देखिन्छ । रोग लागिसकेको अवस्थामा ६ -१० केस्रासम्म लसुन सेवन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
काँचो लसुन चपाउने भन्ने बित्तिकै गाह्रो लाग्न थाल्यो होला हैन - अब गाह्रो मान्नु पर्दैन । लसुनलाई पकाएर पनि खान मिल्ने भएको छ । लसुनलाई ३ मिनेट भन्दा कम पकाएर खाँदा त्यति नै फाइदा मिल्ने गर्छ जति काँचो लसुनबाट पाइन्छ । यो कुरा हालसालै अमेरिका र अर्जेन्टिनाका वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार लसुनलाई पिनेर प्रयोग गर्नु अझ फाइदाजनक हुन्छ । मसलाको रुपमा प्रयोग गर्दा पनि तरकारी पाक्न थालेपछि मात्र लसुन राख्दा यसमा भएका पौष्टिक तत्व नष्ट हुन पाउँदैन र यसले पुर्णरुपमा फाइदा दिन्छ ।
लसुनको यत्रो गुण नबुझी अझै कुन लोकमा हुनुहुन्छ । जाग्नुस्, अब सुन हैन लसुनको पछि लाग्नुस् । सुनले तपाईंको ज्यान लिनसक्छ तर लसुनले जीवनदान दिनसक्छ ।
अब त लसुनको महत्व बुझ्नु भयो होला नि कसो, यस्तो महत्वपुर्ण लसुनलाई आजैबाट आफ्नो भोजनमा समावेश गराउनुस् र रोगमुक्त जीवन बाँच्नुस् ।
१००० वनमा आईस स्‍केटिङ खेल्‍न जाने होइन त ?
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि, यो संसारको मौसम परिवर्तन भैरहेको छ । यही समस्‍यालाई प्रमुख विषय
बनाई संसारका विभिन्‍न शहरहरूमा विश्‍व सम्‍मेलन, विश्‍व गोष्‍ठी, विश्‍वब्‍यापी अभियान आदि भैरहेका छन् ।
के तपाईंलाई यसपाली क्रिसमसको दिन कोरियाको राजधानीमा हिउं नझर्दा सांच्‍चै नै विश्‍वको मौसम परिवर्तन
भैरहेको रहेछ जस्‍तो लागेन?
यो कुरालाई यहीं छोडौं र आउनुस् म तपाईलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्‍छु । यसपाली कोरियाको राजधानी
सउलमा चाहे हिउं परोस् या नपरोस् राजधानीको केन्‍द्रमा रहेको सिटीहल अगाडी रहेको खुल्‍ला चौरमा तपाई
केवल एक हजार कोरियन वन तिरी १ घण्‍टा आईस स्‍केटिङ खेली मज्‍जा लिन सक्‍नु हुनेछ । खेल्‍न आउंदैन भनी
लजाउनु पर्दैन किनकि त्‍यहां हामी जस्‍तै भर्खर सिक्‍दै गरेका मान्‍छेहरू पनि धेरै हुन्‍छन् ।
त्‍यसैले जाने होइन त ?